राउटेको जनसंख्या १४४ पुग्यो | ईमाउण्टेन समाचार
मंसिर १३ २०७८, सोमबार
राउटेको जनसंख्या १४४ पुग्यो
मंसिर ९, २०७८ पढ्न ६ मिनेट
सुर्खेत । फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेहरूकाे संख्या बढेको छ । पछिल्लाे समय याे समुदायमा मृत्युदर बढी रहे पनि जनसंख्यामा पनि वृद्धि भएकाे देखिएकाे छ । जारी जनगणनामा उनीहरूकाे गणना भएकाे हाे ।
स्थायी बसोबास, आधुनिक उपचार पद्धति, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालनदेखि टाढा रहेको यो समुदाय कर्णाली प्रदेश र आसपासका जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने नेपालकै अति लोपोन्मुख जाति हो ।
यो समुदाय दुई महिनाअघि मात्रै सल्यानको पश्चिम बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका-१ वालुबासग्रही बाँगीरह हुँदै भेरी किनारदेखि एक सातामै सोही वडाको घाटगाउँमा बसाइँ सरेको थियो । उक्त समय ४६ घरधुरी रहेका राउटेको संख्या १४१ थियो ।
एक सातायता राउटेहरू नगरको वडा नम्बर ३ काँरागाउँमा सरेका छन् । सोही क्षेत्रमा बसाइ सरेका राउटेको पनि गणना भएको हे । याे क्रममा राउटेको संख्या १४४ पुगेको छ । ७५ महिला र ६९ पुरुष गरी १४४ पुगेकाे गणक टोलीले बताएको छ ।
राउटे समुदायमा पुगेर गण टोलीले दुई दिन लगाएर गणना गरेकाे हाे । राउटे बस्तीमा उनीहरूको विवरण संकलन गर्न दुई दिन लागेकाे स्थानीय जनगणना अधिकारी धर्मराज ढकालले बताए ।
खानपानको शैली बदलियो
पहिलेको तुलनामा अहिले राउटेको खानपिनको शैलीमा परिर्वतन आएको छ । पहिले वन जंगलमा पुग्दै वनको कन्दमूल खाने, बाँदरको सिकारलाई उसिन्ने, भातमा पानी बढी हालेर नुन छर्केर खाने गर्थे आजभोलि यसरी खान छोडेका छन् ।
योसँगै उनीहरूको बस्ने शैलीमा पनि परिर्वतन भएकाे छ । पहिले पहिले बाक्लो समाज मन नपराउने र समाजका मानिसहरूबाट टाढा रहने यो समुदाय आजभोलि समुदाय नजिक बसोबास गर्न थालेका छन् ।
गत मंसिरयता १८ राउटेको मृत्यु
लोपाेन्मुख राउटे समुदाय सल्यानमा बसाइँ सरेपछि उनीहरूको मृत्युदरमा केही कमी आएको छ । गतवर्ष मंसिरदेखियता मात्र १८ राउटेको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो समयमा मयो शाही, दलबहादुर शाही, मानसिंह शाही, शिवराज शाही, कान्छाराम शाही, कपिल शाहीको मृत्यु भएको छ ।
अत्यधिक मदिरा सेवनका कारण अकालमा धेरै राउटेको ज्यान गइसकेको छ । एकातिर मदिराको अत्यधिक सेवन र अर्कोतिर बिरामी हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्दा मृत्युदर बढेको देखिन्छ ।
गणनामा केहीको संख्या बढेको भए पनि वर्षेनी राउटेको संख्या घट्दो छ । सरकारले दिने भत्ता उनीहरू रक्सीमा खर्च गर्ने गरेकाे देखिन्छ । आफ्ना समुदायका सदस्यको मृत्यु हुनासाथ बस्ती छाड्ने प्रचलनका कारण यो समुदाय छिटो छिटो बसाइँ सर्ने गर्छ ।
दुई महिनामै १० ठाउँमा सरे
जंगलमा फिरन्ते जिवन बिताउदै आएको राउटेहरु पछिल्लो दुइ महिनामा मात्र १० वटा ठाउँमा सरिसकेका छन् । पछिल्लो दुई महिनामै उनीहरु १० ठाउँमा बसाइँ सरिसकेका छन्। उनीहरुको रुढिवादी चिन्तनका कारण राउटेको गणना गर्न सहज भने थिएन । यद्यपी लामो प्रयास गरेर गणक टोलीले राउटेको गणना गरेको हो ।
देश/समाज‐मा वर्गिकृतlatest nepali news, nepali news portal, raute, raute population in nepal, राउटे
कोभिडले सुस्ताएको होटेललाई कांग्रेस महाधिवेशनले राहत
प्रहरीमा २३ सय २० जनालाई जागिरको अवसर : १ हजार ९ सय ७१ जवान र १ सय ४६ इन्स्पेक्टर माग, कार्यालय सहयाेगीमा कति ?
भीम रावलले बन्दसत्र स्थल नछोड्ने, खाना पनि बाहिरबाटै प्याक गरेर लगिने
कांग्रेस वडा अधिवेशन : मन्त्री विवाद गर्ने, पिएसओ गोली चलाउने !
एनआरएनएको निर्वाचन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्नु : उच्च अदालत
अधिवेशन रोकेर विधि र पद्धति विपरीत निर्णय गर्नु गलत : भीम रावल
एमाले महाधिवेशनः सहमति नभए विद्युतीय मतदान असम्भव
कांग्रेस महाधिवेशनः लुम्बिनीमा पौडेल पक्षको बर्चश्व, चार जिल्लाको परिणाम बाँकी
राउटे भेट्न टिकट !
राउटेले पनि आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउन थाले
चैत १, २०७५
नेपाल बीमक संघ टुक्रिने संकेत : संगठन बनाउँदै जीवन बीमा कम्पनीहरू
पहिरोको कारण पोखरा-बाग्लुङ सडक खण्ड अवरुद्ध
असार १५, २०७८
लोपोन्मुख राउटेको फेरिँदो जीवनशैली, एकीकृत नीति ल्याउँदै प्रदेश सरकार
असोज ९, २०७८
लोपउन्मुख जाति राउटेको जनसंख्या घट्दै
माघ ११, २०७५